आउटडोर एलईडी वाटरप्रूफ विज्ञापन स्क्रीन शक्ति बचत विधि - इनडोर आउटडोर नेतृत्व भिडियो प्रदर्शन स्क्रीन निर्माता
अधिक र अधिक आउटडोर विज्ञापन तस्बिरहरू र भिडियो विज्ञापनहरू र बाहिरी गतिशील जानकारी प्ले गर्नु आवश्यक छ. यी परम्परागत इंकजेट होर्डिंगले हासिल गर्दैन. हाल, केवल आउटडोर एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनहरूले यी कार्यहरू राम्रोसँग प्राप्त गर्न सक्दछ.
चीनमा आउटडोर एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनको वार्षिक उर्जा उपभोग हो 16.7 अर्ब किलोवाट घण्टा, जुन लगभग तीन गोर्जे बाँधको बिजुली उत्पादनको बराबर हो 60 दिनहरु, को बराबर 8.5 मिलियन टन कच्चा कोइला खपत, र लगभग 17 मिलियन टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन.
यसले समाजका लागि बाहिरी एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनहरू द्वारा सिर्जना गरिएको मानलाई पूर्णतया प्रतिबिम्बित गर्दछ, र आउटडोर एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन प्रयोगको चलन प्रतिबिम्बित गर्दछ.
त्यसकारण, यद्यपि बाहिरी एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिनले धेरै शक्ति खपत गर्दछ, हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौं, हामी केवल शक्ति बचत गर्न उपायहरू फेला पार्न सक्छौं.
त्यसो भए, कसरी गर्न सकिन्छ आउटडोर विशाल एलईडी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बिजुली बचत गर्नुहोस्? gave the following suggestions:
1. उच्च-दक्षता एलईडी प्रयोग गर्दै, प्रकाश उत्सर्जक चिपले कुनाहरू काट्दैन;
2. उच्च दक्षता स्विचिंग बिजली आपूर्ति प्रयोग गरेर, धेरै शक्तिशाली शक्ति रूपान्तरण दक्षता सुधार;
3. प्रशंसकको उर्जा खपत कम गर्नका लागि स्क्रीनको उत्कृष्ट गर्मी खपत डिजाइन क्यारी गर्नुहोस्;
4. आन्तरिक सर्किटहरूको उर्जा खपत कम गर्न एक वैज्ञानिक समग्र सर्किट योजना डिजाइन गर्नुहोस्;
5. बाह्य वातावरणमा परिवर्तन अनुसार स्वचालित रूपमा बाहिरी एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनको चमक समायोजित गर्नुहोस्.
माथिका उपायहरू मार्फत, आउटडोर एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनहरूको उर्जा खपत धेरै कम गर्न सकिन्छ. एउटै समयमा, दक्षताको सुधार र तातो उत्पादनको कटौतीले आउटडोर एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनहरूको हल्का क्षय पनि दीर्घकालीन उपयोगको लागि सानो बनाउँछ.